LEGO Minifigure ရူးသွပ်မှုပြိုင်ပွဲသည်ဆယ်နှစ်စုဆောင်းနိုင်သော Minifigure များကျင်းပသည်
19 / 03 / 2020 20 / 03 / 2020 ဂရေဟမ် 2189 Views စာ0မှတ်ချက် စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသေးစား, Minifigure ရူးသွပ်, သေးသေးလေး
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခုကျင်းပရန် Minifigure Madness ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ခဲ့သည် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား.
နှစ် 10 ဆင်နွှဲရန် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အ Lego အုပ်စုသည် Minifigure Madness ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ခဲ့သည် တွစ်တာ။ ပရိသတ်များသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်အတွက်ကွင်းခတ်လေးခုဖြင့်မဲပေးနိုင်သည်။ ထိုကဏ္sectionsများသည်နောက်ဆုံး၌အနိုင်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအသေးစားပုံစံဖြစ်သည်။
မျက်မမြင်အိတ်ဖွင့်ဆောင်ပုဒ်ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များပြီးရောင်းဝယ်မှုနည်းသောဈေးကွက်များ၌ရောင်းအားအလွန်များပြားသောလူကြိုက်များမှုကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအနည်းဆုံးဇာတ်ကောင်အနည်းဆုံးစီးရီးသုံးခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
• Getups - အရူးပျော်စရာဝတ်စုံဇာတ်ကောင်များ
•အားကစား - အားကစားနှင့်အားကစားနှင့်ဆိုင်သောဇာတ်ကောင်များ
• Time Machine - သမိုင်းမှ ပို၍ လက်တွေ့ကျသောဇာတ်ကောင်များ
Cosmos - သိပ္ပံဝတ္ထုနှင့်အာကာသဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ
မဲ ၆၄ အကြားဖြစ်သည် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းလိုင်စင်ရမဟုတ်သောစီးရီး ၂၀ မှတွစ်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲတိုင်း၌ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူများသည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
၏ထုတ်ဖေါ်အောက်ပါ LEGO Collectible Minifigures 71027 စီးရီး 20 New York Toy Fair မှာ, ဇာတ်ကောင်များ၏တရားဝင်ပုံများယခုအပတ်အစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်.
← Lego Ideas ကြေညာချက်များ Creator Expert 10272 Old Trafford ပြိုင်ပွဲဆုရှင်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Stormtrooper ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် →